TOERAN’NY GOVERNEMANTA : Nanadio tena i Mahafaly Solonandrasana Olivier | NewsMada
Manoloana ny raharaha mafampana misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana amin’izao fotoana, nitondra fanazavana, ary niezaka nanadio ny tenany ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, omaly rehefa niresaka tamin’ireo mpanao gazety teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo…
Na dia tsy niteny mivantana aza dia hita ihany fa nanadio tena nanoloana ny valy bontana nataon’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana. “Miaro ireo minisitro ireo aho, ary miaro ireo mpitondra teny izay mmanao ny ezaka rehetra mba hitondrana ny zavatra ao amin’ny filan-kevitry ny governemanta. Aza heverina koa izao teniko izao fa hoe fihemorana satria misy tsindry”, hoy ny nambohany ny fanazavany. Ny tsikaritra anefa, tsy hisy mihitsy ny filazana maika ataon’ny praiminisitra toy izao raha tsy nisy zava-nitranga tao. Nilaza araka izany ny praiminisitra fa raharaha lavanila no tena niompanan’ny resany tamin’ireo tompon’andraikitry ny filaminana. “Ny halatra miseho eo amin’ny sehatry ny lavanila no nilazako fa handraisana fepetra hentitra izay tompon’andraiki-panjakana tratra manao kolikoly”, hoy izy.
Raharaha Razaimamonjy Claudine
Manoloana ny raharaha Razaimamonjy Claudine, nilaza i Mahafaly Solonandrasana Olivier fa aleo ny fitsarana no hanao ny asany. Raha tsiahivina anefa, nahitsy ny sendikan’ny mpitsara fa misy tsindry ao anatin’io raharaha io. Nandritra ny fanazavan’ity lehiben’ny governemanta ity tamin’ny mpanao gazety, nisy ihany ny tsindrom-paingotra nataony an’ireo mpitsara, izy izay nihirahira fihavana sy tsy fihantsiana tany amboalohany. “Aoka ao anatin’ny fanajana ny lalàna tanteraka no tokony hisehatra ny tsirairay avy fa tsy hoe hampihatra lalàna amin’izao mety hitiavantsika azy, na hoe teren-ko masaka ohatran’ny voalobo-jaza”, hoy ihany ny praiminisitra. Raha tsiahivina anefa, ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra nentin’ny mpitsara nanao fitsidihina tampoka ity mpandraharaha ity tao amin’ny hôpitaly saingy izy ireo indray no mbola voatohintohina tamin’izany asan’izy ireo izany. Na inona na inona lazaina, ny tantara no mamerina, fa ny anaran’ity praiminisitra ity, ary izy tenany mihitsy, no naisain-dRazaimamonjy Claudine nantsoin’ny mpiambina azy tamin’ny fotoana nisamboran’ny Bianco azy tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahan-tena sy ny kolotsaina. Na inona na inona fanazavana entin’ny praiminisitra, mahafanta-javatra ao anatin’io raharaha Razaimamonjy io izy, na amin’ny maha-praiminisitra azy na amin’ny maha minisitry ny atitany azy izay mamoaka ireo fanampiana manokana ireo kaominina voalaza fa naodin’ity mpandraharaha ity.